Ny orinasa dia manome tetikasa fampiantranoana ny orinasa madinika, ny manam-pahaizana manokana momba ny Internet, ary ny olon-tsotra ary manana birao any amin’ireo faritra tena tsara indrindra eran-tany, anisan’izany ny Silicon Valley, Cambridge, Seattle, Seattle, Hyderabad, Belfast, ary Phoenix.
Mahaliana fa GoDaddy dia manohana ihany koa ny antony manohana ireo antony marobe – any Phoenix, izay any GoDaddy manana trano 270.000-metatra toradroa, ny orinasa dia nanao fanomezana be dia be ho an’ny Hopitaly Ankizy Phoenix, ny Arizona Humane Society, ary ny Phoenix Zoo.
Ny IPO GoDaddy dia nanangana vola $ 460 tapitrisa tamin’ny april 2015.
4 GoDaddy Hosting Gebruikersrecensie
4.2 Inona geen tiako amin’ny GoDaddy Hosting?
4.3 Misimisy kokoa momba ny fotoana fitsidihan’ny GoDaddy & ny hadisoana mpizara
6 Kort gezegd: Tokony hiaraka amin’i GoDaddy ve ianao?
6.2 Zava-dehibe: Ny fanamarihan’ny mpamoaka lahatsoratra ea amin’ny Saurabh’s GoDaddy Review
Domeinen – 55,5% ny vola miditra
Fampiasana ny Business – 8.0% ny vola miditra manontolo
Ny fidiran’ny GoDaddy avy amin’ny fisoratana anarana dia mety miovaova worden. Ny orinasa dia miampanga ny vidiny isan-karazany amin’ny karazana domains. Ohatra, tamin’ny fotoana nanoratana, ny fisoratana anarana vaovao dia $ 8,99 / taona ho an’ny fe-potoana 2 taona. Ny mahaliana, ny tolotra sy ny .org sy ny orona dia mitovitovy aminy, raha izao. Ankehitriny dia mitentina $ 24,99 / taona.
Ny Fizarana ny Hosting en aanwezigheid oa GoDaddy dia nitentina teo amin’ny $ 370 tapitrisa nandritra ny sivy volana tamin’ny 2014.
Ny vola miditra avy amin’ny fizarana "Hosting en aanwezigheid" dia ahitana ny vokatra fananganana tranokala, SEO, SSL mari-pankasitrahana, fiarovana ny tranokalan’ny SiteLock, IP’s manokana ary mihoatra. Raha ny resaka fampiantranoana, GoDaddy dia manolotra, VPS ary serikan’ireo mpanjifanao manokana amin’ny taham-bola hatramin’ny dolara dolara isam-bolana isaky ny domains. Ankoatr’izany, ny fampiantranoana dia ahitana fitaovana fananganana tranokala mba hahafahan’ireo mpanjifany manamboatra ny tranokala haingana sy haingana.
Ny ampahan’ny Business Applications an’ny GoDaddy dia nitondra vola mitentina manodidina ny $ 81,6 tapitrisa amin’ny sivy volana amin’ny 2014.
Ny "Zakelijke toepassingen" an’ny GoDaddy dia misy ireo zavatra speelgoed ny kaonty mailaka, ny fivarotana an-tserasera, ny fitahirizana angon-drakitra amin’ny internet, ny marketing mailaka ary ny rafitra fandoavam-bola an-tserasera.
Ny sasany amin’ireo vokatra manokana entina amin’ny Zakelijke toepassingen dia:
Microsoft Office 365, Izay Manomboka Amin’ny Vidin’ny $ 4,99 / Volana Isaky NY MPampiasa
Eny ary, ny lafin’ny orinasa sy ny is a ara-bola ampy. Amin’ity famerenana ity dia hifantoka amin’ny serivisy fampiantranoana GoDaddy izahay. Manolotra drafitra fampiantranoana telo samy hafa ny orinasa sy ny orinasa:
Toe-Karena: $ 4,99 isam-bolana ho an’ny tranonkalan’ny 1, 100 GB, fitaterana tsy voafetra, ary adiresy imailaka 100.
Deluxe: $ 5,99 isam-bolana ho an’ny tranonkala tsy voafetra, fitehirizana tsy voafetra, bandbreedte tsy voafetra ary hatramin’ny adiresy mailaka 500.
Ultieme: $ 7,99 isam-bolana ho an’ny tranonkala tsy voafetra, fitehirizana tsy voafetra, bandbreedte tsy voafetra ary hatramin’ny adiresy mailaka 1.000.
Door drafitra rehetra dia ahitana sehatra malalaka ahitana drafitra isan-taona, fanaraha-maso ny fiarovana sy ny fiarovana XDUMX sy dy DDoS fiarovana, ary ny tambajotra fanaraha-maso mahasoa.
Ataovy ao an-tsaina fa rehefa mandamina teknika ny fandrosoana tsy misy fetrany, ary ny drafitra Deluxe sy Ultimate fampiantranoana dia manao dokam-barotra tsy misy fetra, tsy voafetra ara-teknika. GoDaddy dia mitazona ny zo hampandre ny mpampiasa raha mampiasa ny fitahirizana fitahirizana ny bandwidth hampihena ny fahamendrehan’ny servera GoDaddy on misy fiantraikany amin’ny fotoana mety. Amin’ity tranga ity, ny mpampiasa dia takiana amin’ny fanavaozana amin’ny Serve Private Private na ny Serveur Dedicated Private.
GoDaddy-hostingplannen – Toe-karena, Deluxe, ary Ultimate. Sary nalaina tao amin’ny tranonkala GoDaddy http://www.godaddy.com, azafady manondro ireo tompon’andraikitra mba hahazoana marim-pototra indrindra amin’ny vidiny & fampiantranoana fampiasa.
Mitsian Toe-Karena Tena ilaina starterDouble MegaMax Snel kilalaon’afo
Opslag 100 GB manam-petra 100 GB manam-petra manam-petra manam-petra
SSD? Nee Nee Eny Nee Eny Nee
Data overdracht manam-petra manam-petra manam-petra manam-petra manam-petra manam-petra
Nomena Domain 1 manam-petra 1 manam-petra manam-petra 1
Periode Periode 45 andro amin’ny fotoana rehetra amin’ny fotoana rehetra 30 andro 30 andro 90 andro
Famoahana ny sarany (famandrihana 24-mo) $ 3,99 / maand $ 2,25 / maand $ 3,95 / maand $ 2,45 / maand $ 4,90 / maand $ 3,74 / maand
Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling
GoDaddy Hosting Gebruikersrecensie
Ho valin’ny fanontaniana ara-bola – "Moa ve alefan’ny GoDaddy Hosting?" Dia nanontany ireo mpampiasa GoDaddy mpampiantrano, Saurabh Tripathi avy amin’ny Miezaha mitsiky, hizara ny traikefany. Saurabh dia mpividy GoDaddy nanomboka ny volana 2014. Ireo sokajy manaraka (ao anatin ‘ny fiheveran-tena sy ny tsipika, ary ny tsipika ambany, tsy voatosika, ny fanamarihako amin’ny teny italiana) dia nosorath’.
Nanao sonia ny drafitra mora indrindra amin’ny GoDaddy aho. Miankina amin’ny $ 3 izany – ao anatin’izany vola izany no ahazoanao 512 MB RAM sy bandwidth tsy misy fetra, mitovy amin’ny fampiantranoana hafa. Misy fahasamihafana goavana: Tsy toy ny tolotra hafa fampiantranoana, izay manolotra tahirin-tserasera tsy misy fetra, dia hahazo 30GB fitehirizana. Nampanantenaina koa ianao 99,9%.
Inona geen tiako amin’ny GoDaddy Hosting?
Willekeurige fouten: Nahita "Fahadiso ny fametrahana ny fampifandraisan-davitra" 3 tao anatin’ny roa volana farany, na dia tsy mora aza ny nanamboatra azy io fa mbola tena manahiran-tsaina mihitsy.
GoDaddy dia mivarotra ny toe-tsaina rehetra: Isaky ny manandrana manavao ny anaran’ny fandraisam-bahiny na ny anaran-tserasera ianao dia miezaka mafy i GoDaddy hivarotra amina fanohanana fanampiny. Rehefa tsindrio ny "Vernieuw Hosting", dia ho hitanao misimisy kokoa, manandrama hivarotra anarana nomena anao sy e-mail hosting etc.
Misimisy kokoa momba ny fotoana fitsidihan’ny GoDaddy & ny hadisoana mpizara
Toa tsara ny zava-drehetra amin’ny voalohany [rehefa nosoratako voalohany tao GoDaddy]. Met fampiasana fahatsiarovan-tenan’ny WordPress amin’ny fampiantranoana kely kokoa noho ny MBX 150, ny Speed ​​dia tsy haingana fa tsy azonao atao koa ny milaza azy ho mora. Mampiasa ny Jetpack Email Updates aho hanaraha-maso ny fampiasana Internet. Manara-maso ny tranonkala tsy tapaka ary mandefa mailaka mailaka rehefa miala ny tranokala. Roa na in-telo isan-kerinandro aho no mahazo mailaka fa ny tranonkala dia midina, ary matetika dia ao anatin’ny 10 minitra. Ny fotoana maharitra indrindra hitako dia ny 39 minuten. Mampalahelo izany.
Tao anatin’ny 3 volana lasa izay dia nahita ny "Faharesena Database Connection diso" tamin’ny andron’ny 4. Ireo fahadisoana ireo dia manjavozavo amin’ny natiora ary azoko antoka fa tsy misy zavatra tsy mety amin’ny WordPress. Na izany aza dia mora ny mametraka ireo olana ireo. Het is geupdate mamela ny mpampiasa hampiasa plugin plugin ary hitako fa ilay lalana sarotra. Taorian’ny nametrahana ny WPSuper Cache dia nipoaka ilay tranokala ary nahavita ezaka maro aho hamahana izany. Indraindray aho dia nihaona tamin’ny Error 520 ihany koa, ary diso ireo fahadisoana ireo.
GoDaddy juni / juli 2016: host-uptime: 99,97%
Kort gezegd: Tokony hiaraka amin’i GoDaddy ve ianao?
Met fametrahana famatsiam-bola ao amin’ny GoDaddy dia tsara ho an’ny olona izay te-hahita vohikala kely ary te-haneho fotsiny ny fanatrehany an-tserasera (toy ny tranokala kely iray izay mampiseho ny orinasanao atny ‘). Raha tianao izany dia tsara ny mandeha. Na izany aza, raha mikasa ny hampiasa CMS toy ny WordPress ianao, GoDaddy dia manana fepetra marobe ho anao. Metsy tsy maintsy mandany fotoana be dia be mamaritra zavatra ao amin’ny CPpananao ianao. Noho izany raha te hampiantrano ny WordPress tranonkala ianao dia mandehana miaraka amin’ny drafitra Hosted ho an’ny fampiantranoana WordPress na mitady hafa webhost.
GoDaddy versus DreamHost
GoDaddy versus Solika Network
Zava-dehibe: Ny fanamarihan’ny mpamoaka lahatsoratra ea amin’ny Saurabh’s GoDaddy Review